Ahoana ny fiasan'ny brhesive bra
Raha tsy tiana ho voafetra ianao rehefa mampiasa bras mahazatra, voafetra ny fitafianao, mivoaka ny tampony ny tadiny ary na dia voatsindrina tsara izy ireo, dia mahatsiaro foana ianao fa mianjera na mifindra amin'ny toerana iray. Ary ny fehin-kibo tady na underwire dia afaka mamela anao hihosina lalina. Na ny tadona any an-damosina aza tsy dia mahafinaritra loatra.
Angamba mety manahirana anao koa ny bra tsy tapaka:
Ny fehin-kibo tsy misy henjana na ny mety aminy aza dia mety hampisy fanaintainana maro be.
Betsaka ny vehivavy indrindra fa ireo manana nono be dia mimenomenona fa mahatsapa fanaintainana aoriana. Indraindray dia tsy noho ny lanjan'ny fonao voajanahary fa noho ny famatorana mamatotra ny sorokao tsy tapaka.
Ny bra iray dia natao amin'ny fitazonana ny tratranao ary noho izany dia ilaina ny fananana hozatra mafy. Saingy satria zatra ny hozatrao dia manary hery tsy hitazona ny vehivavyo.
Ny loza ara-pahasalamana hafa avy amin'ny bras dia ny fanakanana ny lymph node. Ny fehin-kibo henjana dia tsy mamela ny tratranao mandefa tsiranoka lymphatic ary mety hitarika homamiadana ihany koa.
Inona no atao hoe bra?
Alohan'ny hitantaranay anao ny momba ny fomba fitafy ny bra, andao aloha hotantaraiko aminao ny tena toetrany. Ny bras, matevina, bras, na bras adhesive satria antsoina matetika ireo no tena tsara indrindra milaza fa tsy mihetsika, tsy mihetsika braska izay miraikitra amin'ny sisin'ny nono amin'ny fampiasana mari-pahaizana momba ny fitsaboana. Ny bras dia karazan'akanjo vehivavy izay natao hanohanana ny tratrany ary hisorohana ny olana toy ny fanaintainana sy ny fanaintainan'ny lamosina izay miteraka lanja be loatra. Izy ireo ihany koa dia mamolavola endrika ho vehivavy ary manandratra ireo vehivavy roa, manome vatana miharihary kokoa. Na izany aza, maro ny bras no mivoaka avy any ivelany tsy misy dikany ary izany no lehibe! Izay no ahafahana mamonjy ireo bras-bras.
Izy ireo matetika dia vita amin'ny silicone, polyurethane, na fitaovana mitovy. Izy ireo dia mety indrindra amin'ny akanjo izay tsy mihetsika, tsy mahazaka, tsy misy soroka, na amin'ny akanjo lava manambara ny manodidina ny faritra eo an-toerana. Natao hanome fanampiana mitovy amin'ny tratran'ny vehivavy izany ho toy ny bra brons, fampivoarana fanamafisana, ary fiandrasana tsy misy hita maso. Ny mari-pahaizana ho an'izany rehetra izany dia mazava ho azy fa vita ny asa!
Ny tombony amin'ny bra miraikitra:
Ny malefaka bras dia malefaka ary mora kokoa satria afaka mifikitra aminy fotsiny ianao, izay mahatonga azy ireo hanamora kokoa. Tsy misy ihany koa ny fanesorana ny fantsom-bolanao.
Betsaka ny vehivavy mitaraina momba ny tsy fahitana ny fanaintainana miverina. Nefa amin'ny bra brhesive, tsy izany no zava-misy mba hahafahanao mankafy ny fanohanana tsy misy fanaintainana.
Miaraka amin'ny brasse bras dia tsy maintsy manao ny asany ny hozatry ny nononao voajanahary, ka izany no misoroka ny mangina.
Ny fehin-kibo henjana dia tsy mamela ny tratranao amin'ny tondraka ranom-bava.
Aorian'ny fisalobohana bras matevina sy ny fanaintainan'ny tendanao dia mety hanamaivanana anao.
Ahoana ny fomba hanasa sy hanadiovanao ny vatanao mifikitra:
Mihosotra malalaka ny alikaola
Ataovy azo antoka fa nohidiana ny tanana roa ary maimaim-poana ny menaka
Sokafy ny fehin-kibo, atodiho ny plastika miaro amin'ny anatiny mankany ivelany.
Voalohany, ampirimo amin'ny rano madio ny bra.Press dia voasintona kely ao anaty bra bress.Massage manadio moramora ny faritra kaopy.Alezo mihetsika mivezivezy amin'ny tendron'ny rantsantanana (fa tsy ny fantsika) dia aza tapaka ny fantsom-pako amin'ny fampiasana fantsika. .
Avelao ho maina maina / rivotra izy.
Ahoana ny fomba hitafy:
Madio sy maina ny hoditrao, esory ny menaka vatana sy ny sisa amin'ny hoditra.
Apetaho amin'ny lafiny iray
Mampifandray ny clasp teo aloha.
Arotsaho tsara ny tananao eo amin'ny tanany roa amin'ny kapoakan'ny bra dia mihazona mafy mandritra ny segondra vitsy.
Alika sy aretina hafa mety hitranga:
Na dia aorian'izany rehetra izany aza dia mety mbola eritrereto hoe inona ny fitahiana ny bra-stick ary ny fomba nanamorana ny fiainana ho mora kokoa, tsy afaka hamita ity lahatsoratra ity izahay raha tsy mampahafantatra anao ny loza momba ny fahasalamana izay mety hitranga noho ireo.
Aretin-koditra: Indraindray ny kaopy silicone dia atao miaraka amin'ny fitaovana manjary ambany ary mety hitarika rashes sy aretin-koditra. Na ny adhesive aza dia miteraka allergy sy fihetseham-po eo amin'ny vatanao.
Olana tsy mihetsiketsika ambany: Ny Silicone dia manana fofon'aina be loatra ary mety hiteraka olana indrindra raha toa azy matetika loatra.
Ka ahoana ny fiasan'ny adhesive antsika:
Ny masonay adhesive dia mihatsara kokoa noho ny bra brhesive nentim-paharazana:
Our Mifandray Bra Nandalo fanamarinana tontolo iainana.Tsy manahy momba ny hoditrao, ny bra vita fanolanana dia vita avy amin'ny silicone somary sariaka amin'ny hoditra ary afaka manome anao traikefa tsy nisy nahitana tsy nahitana fanaintainana.And ary natao ho an'ny kilasy ara-pitsaboana gel-hypoallergenic, mety ho fiarovana izy ireo, salama ary mitafy aina amina hoditra be saro-pady indrindra.
INSTANT BREAST LIFT, fifamoivoizana eo ho eo eo amin'ny 3cm, omena habe 3 ho anao ianao, ny vehivavy vao nohavaozina dia manosika ny bra tsy misy tsy misy endrika tsy misy pentina tsy hita maso no lehibe ary mahazo aina tsara handrakofana ny tratranao.Mety miraikitra mafy ary mahavita mijanona ny vehivavy izay nohavaozina. apetraka tsara mba hiarovan-tena tanteraka ny tratranao tsy hianjera ary tazomy hatrany ary tohizo amin'ny endrika tsara. Noho ny famolavolana lavaka boribory sy vita amin'ny fo, dia afaka ny fofon'aina.
Miraikitra amin'ny tena, saro-pady amboarina sy saro-pady 100%, malefaka ary mahazo aina, mety amin'ny hoditra saro-pady. Ny silicone matevina mafy dia mifanentana amin'ny tarehinao raha toa ka mijanona eo amin'ny toerany, rakony tsara ny faritra misy ny nipple manontolo. Fomba tsara handehanana bra-less.reusable imbetsaka.Amin'ny fampiasana tsirairay dia sasao amin'ny rano mafana ao ambanin'ny 30℃, rano sy savony malefaka avy eo rivotra rivotra tanteraka.
The avoaka ny nipplecovers Ny satroka mahery vaika tsy azo antoka dia miorina amin'ny alàlan'ny sakan'ny tratranao ary mitazona ny tratrany sy tohatra. Vahaolana tonga lafatra ho an'ny Tops, Akan-damaody, akanjo tsy misy lamosina, tsy misy lamosina, lalina-V, akanjo fampakaram-bady sy akanjo.
Famolavolana miavaka sy gel gel-hypoallergenic mitovy amin'ny hoditra faharoa, mahazo aina sy miondrika mandritra ny andro.